Blockchain News 31 Janoary 2018 - Blockchain News
Zavatra hafatra goavana-dalana, mba hanomboka ny cryptocurrency fifanakalozana
Japana hafatra lehibe indrindra fanompoana nanambara androany – ny drafitra hanombohana sy fanatanterahana ny cryptocurrency fifanakalozana, mba ho afaka amin'ny chat ao anatin'ny fampiharana izay ubiquitous eo ny 200 tapitrisa maneran-tany ireo mpampiasa mavitrika isam-bolana.
Ny Tokyo miorina amin'ny chat fampiharana nanamafy fa efa nametraka ny fampiharana ny Financial Services Agency (FSA) - ara-bola Japana regulator - hisoratra anarana ary hanomboka ny cryptocurrency fifanakalozana. Ny fampiharana amin'izao fotoana izao eo ambany Famerenana.
Ny hafatra goavana ny fandraisana andraikitra mba hanolotra cryptocurrency varotra tonga miaraka ny fandefasana ny vaovao-dalana, orinasa antsoina hoe Financial, izay ihany koa ho fanatitra handalina tolotra ara-bola ny mpampiasa.
-Dalana, Financial-dalana manaraka ny efa-malaza finday famindrana vola handoavana ny trosa service-dalana, Pay, ny asa fanompoana ao-dalana, afaka ny hafatra fampiharana. In 2017, -Dalana, vola nihoatra 40 tapitrisa ireo mpampiasa voasoratra anarana tamin'ny isan-taona maneran-boky raharaham-barotra indrindra ¥ 450 miliara ($4.1 lavitrisa).
Bitcoin takalon'ny Huobi US dia hanokatra birao
Shina-monina Huobi, teo aloha iray amin'ireo lehibe indrindra ao amin'ny firenena cryptocurrency fifanakalozana, mikasa ny hanomboka birao ao San Francisco.
Lehiben'ny Strategy manamboninahitra Cai hoy Kailong “Huobi mitady mitombo sehatra iraisam-pirenena… ny U.S. no ho ny fifantohantsika amin'izao fotoana izao.”
Huobi no fananganana foibe vaovao ao amin'ny Silicon Valley faritra, mampiavaka ny hanoto toy ny fifadian-kanina-dava iray, araka ny mpitondra tenin'ny ho an'ny orinasa.
Volana lasa, Huobi nanambara dia miara-miasa amin'ny orinasa fampiasam-bola SBI Group mba hanomboka ny mpivady ny cryptocurrency fifanakalozana tao Japana mba hanolotra Yen mifototra amin'ny tolotra.
SBI Virtual Currencies sy Huobi Japana tsy nanambara misy mafy noho ny Tantara amin'ny tsirairay avy ny famoahana.
Korea Atsimo ny Minisitry ny Vola: Tsy misy drafitra handrara cryptocurrencies
Korea Atsimo ny Minisitry ny Vola hoy ny governemanta tsy manan-drafitra mba hanakatona cryptocurrency varotra, Tonga soa eto vaovao ho an'ny mpampiasa vola Niahiahy ny manam-pahefana mba handeha hatrany Shina zavatra sarotra amin'ny fanakanana sehatra virtoaly vola madinika.
Ny fanehoan-kevitra nataon'i Kim Dong-yeon tamin'ny Alarobia tonga any an-trano toy ny mpivarotra sy manerana izao tontolo izao no spooked tamin'ny fanehoan-kevitra mifanohitra avy amin'ny manam-pahefana ao Korea Atsimo, lehibe ho an'ny cryptocurrency foiben'ny varotra, fa Seoul dia mikasa ny handrara an-toerana nomerika fifanakalozana vola madinika.
"Tsy misy eritreritra ny handrara na hanafoanana ny cryptocurrency (tsena),"Kim hoy, manampy ny governemanta asa avy hatrany dia ny fandrindràna fifanakalozana.
Seoul fanamafisana ny finiavana mba hanenjanana kokoa ny screws amin'ny tsena be hita ho manjavozavo sy mampidi-doza amin'ny Global politika, ny fomba amam-panao ny firenena ny alarobia teo aloha efa nanambara fa tsy ara-dalàna nanesorany cryptocurrency varotra fifanakalozana vahiny efa ho sarobidy $600 tapitrisa.
"Service fomba amam-panao efa akaiky tsy ara-dalàna avy any ivelany mijery fifanakalozana ara-barotra amin'ny fampiasana cryptocurrency ao anatin'ny asa ny governemanta force,"Dia hoy.
Mety hanomboka Vadinao ...
Previous Post:Ahoana no ho lasa blockchain developer
Next Post:Ahoana no hitarika ny ICO tany Soisa